IPadOS 15 matipi uye manomano ekuti ubudirire pazviri | IPhone nhau
IPadOS 15 Matipi uye Matipi ekuti uwane Zvizhinji mairi
Miguel Hernandez | 03/08/2021 22:00 | iOS, iOS 14, iPad, dzakawanda
Kuuya kwe iOS 15 iri kuswedera padyo nepadyo, ndosaka tisina imwe sarudzo kunze kwekuongorora ramangwana mashandiro ekambani yeCupertino kukuchengeta iwe uchiziva kwazvo panguva yenhau dzese, ipapo chete ndipo paunokwanisa kuwana zvakanyanya kubva mudziyo uye izvo zvatiri ikozvino iPhone.
Tsvaga pamwe nesu aya madiki madiki uye nhau dzePadOS 15 iyo yatinokuunzira nekubata yako iPad kunge nyanzvi. Usavarase, zvirokwazvo mazhinji eaya uchiri kusaziva uye ivo vanokushamisa, uri kuzopotsa uyu mukana?
Sezvo pane dzimwe nguva, isu tasarudza kuperekedza ichi chinyorwa nevhidhiyo inoshamisa kubva kuchiteshi chedu YouTube, saka kana wanga usingazvizive, inguva yakanaka yekuti unyore uye utibatsire kuti tirambe tichikura, isu tatova nevashoma vakasara kune 100.00 vanyori uye vese vanoverenga.
Tinotora mukana uno kukuyeuchidza izvozvi iPadOS 15 Iri muchikamu chebeta, saka idzi nhau dzinoenderana neshanduko diki pakati pazvino naGunyana kana Gumiguru, izvo zvichaziviswa sekumisikidzwa zviri pamutemo kwesisitimu inoshanda.
1 Muturikiri akabatanidzwa zvizere
2 Girazi rinokudza rakadzoka uye isu tine dhirowa yekushandisa
3 Shanduko muSafari uye nyowani multitasking
4 Kuvanzika kana uchigovana skrini uye kusangana pamwe neMacOS
5 Apple TV mapikicha uye kure kure zvinowedzera
Muturikiri akabatanidzwa zvizere
Iye zvino muturikiri weIOS 15 akabatanidzwa zvizere mukati iPadOS 15 nekuuya kweiyo nyowani yekushandisa sisitimu, saka haufanire kupotsa mukana uyo iyo Apple yaunokupa. Chekutanga pane zvese, muturikiri akawedzerwa zvizere kuburikidza neSafari, saka, Kana isu tikapinda webhusaiti mune mumwe mutauro, iyo «muturikiri» icon ichaonekwa mu Safari yekutsvaga bar. Kungozvimanikidza kuchaita mashiripiti uye peji racho rinodudzirwa. Mumiyedzo yedu yakaunza mhedzisiro uye shanduro dzakanakisa pane izvo zvaunotarisira.
Zvakafanana zvinoitika neshanduro yekushandura iyo inozosvika iPadOS 15 zvizere.Nenzira iyi tichava nemhando dzakasiyana dzekushandura, yekutanga ndiyo iyo inobvumidza iwe kududzira iwo mavara iwe aunopinda mune chero emitauro anowanikwa. mukati mekasi. Izvozvowo zvichaitika neiyo "hurukuro" maitiro, iwe unongoteerera kuburikidza nemakrofoni uye wotipa mhedzisiro. Muchokwadi, iko kunyorera kucharongedzwa zvakamira uye pachikamu chakakamurwa kuitira kuti vanopindirana vagone kudyidzana nyore nyore neiri mushandisi interface. Zviripachena kuti isu tinokwanisa zvakare kududzira zvakananga kuburikidza nemakrofoni, uye kunyangwe iine maficha matsva ekubatanidza uye kuzivikanwa kwemavara kuburikidza kamera.
Girazi rinokudza rakadzoka uye isu tine dhirowa yekushandisa
Sezvo iwe uchayeuka vanonyanya "veteran" vashandisi mune ino iOS, Munguva yakapfuura, kusati kwasvika kwekusarudza kusarudza (paunobatisisa bhatani renzvimbo pane iyo keyboard), kusarudza zvinyorwa kwaizovhura "yekukudza girazi" kuti tikwanise kuchinjika pakati pemavara zvakanyatsonaka. Huye, iro rinoshamisa girazi rinokudza rakashandura zvine mashiripiti kuIOS 15 kufambisa maitiro ese.
Iyo iOS 15 app dhirowa, iyo nyowani yekuronga app system iwe yauchada kana kuvenga. Ini pachangu, zvinoita sekubudirira uye ndajaira mashandisiro ayo, ngatitaurei chokwadi, hatishandise mamwe mafomu zuva nezuva pane aya anowanikwa pachiratidziro chemumba. Nekudaro, iyo shanduro yezvidzitiro zvekumba, Widgets uye kuodha iyo Spotlight zvakare inouya kuPadOS 15 sezvo isingakwanise kuve neimwe nzira.
Shanduko muSafari uye nyowani multitasking
safari anga ari mumwe weakakura "akarasikirwa" yeiyi nyowani iOS 15, ikozvino tabu manejimendi system inotaridzika kunge macOS kupfuura nakare kose, izvo zvinoita kuti isu tishamise uye tisinga nzwisisike pakutanga. Nenzira iyi, kuwedzeredzwa uye zvemukati zvinoshandiswa zvinosvika pakadzika.
Iwe unogona nyore kufambisa iwo tabo
Tongedza tabo kuruboshwe kuruboshwe
Wedzera uye gadzirisa chidzitiro chekumba
Zvimwe chete nekuita zvakawanda, Ikozvino icharatidzirwa nekatatu poindi muchikamu chepamusoro, kutsvedza tichizokwanisa kuyanana uye yepakati bhaa ichaonekwa iyo inotibvumidza kugadzirisa saizi mukuda kwedu uye kukunda.
Iwe unogona kubata multitasking nekutsvedza iyo yepamusoro katatu poindi> pasi
Mukuwandisa mabasa ekuSplitView anoonekwa pamwechete uye tinogona kuavhara
Mamwe ese echimiro echinyakare mukuita multitasking anosara
Kuvanzika kana uchigovana skrini uye kusangana pamwe neMacOS
Tinotanga nemugwagwa unonakidza kwazvo, kana iwe ukaenda Zvirongwa> Notifications> Goverana skrini iwe unozogona kudzima kana kumisikidza kana iwe uchida mukana wekuratidza kana kwete notices dzatiri kugamuchira isu tichigovana skrini. Sezvaunoziva, FaceTime ikozvino inotibvumidza kugovana zvatiri kuita pane yedu iPad tichiita kufona, saka kuremadza ziviso kuri kuita kunodiwa.
Kana uchirangarira zvakanaka, kusangana pamwe ne macOS kunotibvumidza kushandisa yedu iPad seyakawedzera desktop, Zvakanaka, kwete chete kuratidza zvirimo asi iyo nyowani iPadOS keyboard uye cursor ichabatanidzwa kana isu tichifambisa mbeva kubva kuchiratidziro kwatiri kumhanya macOS kuti ipe iri nani chiitiko zvakananga paPadOS, edza izvozvo.
Apple TV mapikicha uye kure kure zvinowedzera
Iyo yekushandisa Mifananidzo yave iri yeakanyanya kubatsirwa nekuuya kweiyo iPadOS 15, kunyanya maererano nekugona. Iye zvino patinosarudza mufananidzo, isu tichakwanisa kubaya «i» bhatani mune iro rakawanda ruzivo ruchaonekwa.
Tinogona kuwedzera chinyorwa kubatsira Artificial Intelligence uye Spotlight
Isu tinokwanisa kuwana iro chairo zita uye zuva remufananidzo
Tichakwanisa kuwana iyo EXIF ​​ruzivo iyo ichatiratidza isu mudziyo wemufananidzo, hunhu hwekamera uye marongero epfuti yakatarwa
Ivo vacharatidza mini-mepu ine geolocation yemufananidzo kana tichida.
Uye pakupedzisira iyo itsva Apple TV iri kure, Kana iwe ukatsvedza> pasi kudzikisa iyo Center Center, iwe uchaona kurudyi (kana iwe uine Apple TV kumba) iyo nyowani Apple TV kure. Kunyangwe iri diki uye ichiratidza diki trackpad iyo ichaita kuti zvive nyore kwatiri kushandisa, inoparadza hafu yechidzitiro uye hatizokwanisi kuishandisa muSplitView, chimwe chinhu chatinofungidzira kuti vachachinja mune ramangwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » IPadOS 15 Matipi uye Matipi ekuti uwane Zvizhinji mairi
Apple ndiyo kambani inobatsira kwazvo pasi rese zvinoenderana nerondedzero yeFortune Global 500
Spotify inotanga Spotify Plus, yakachipa asi ine ma ads